यी हुन् हर्टअट्याक हुने मुख्य कारणहरु !
एजेन्सी । चुरोट सूर्तिको सेवन हानिकारक छ । अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने दम र फोक्सोको क्यान्सर गराउँछ भन्ने केहीलाई थाहा छ । तर, त्यसबाहेकका अन्य असरका बारेमा भने चाहिँ एकदमै थोरैलाई थाहा छ ।
धेरैलाई चुरोटको सेवन मुटुका लागि पनि असाध्यै जोखिमपूर्ण छ भन्ने जानकारी नै छैन । क्यान्सर र फोक्सोको रोग हुन लामो समय खानुप¥यो तर हर्टअट्याक हुन लामो समय खान जरुरी छैन ।
संसारमा सबभन्दा बढी मान्छेको मृत्यु हर्टअट्याक, क्यान्सर र मष्तिष्क घातबाट हुन्छ । यी तिनटै रोगको सबभन्दा ठूलो एउटा कारण धुमपान हो । यसैगरी महिलो गर्भ खेर जानेदेखि बाँझोपन निम्त्याउनेसम्म असर गर्छ चुरोटको सेवनले । किनभने यो सिधा फोक्सोमा जाने र यसका खराब तत्वको फोक्सोबाट रक्तनली हुँदै शरीरभरि फैलिने गर्छन् ।
मुटुमा यसको असर धेरै छ । तर, एकदमै कमैलाई थाहा छ कि एक दुई पल्ट मात्रै चुरोट लिँदा पनि हर्टअट्याकको जोखिम उच्च छ भन्ने । कसरी चुरोटले निम्त्याउँछ त हर्ट अट्याकको जोखिम ?
यसको प्रक्रिया छ । चुरोटको धुवाँबाट फोक्सोमा पुग्ने खराब रसायन फोक्सो हुँदै रक्तनलीमा पुग्छ । यो मुटुको रक्तनलीमा पुग्दा यसको (आर्टरी)को भित्तामा टाँसिन्छ । जसले आर्टरीको भित्ता अर्थात् इपिथलियमलाई ड्यामेज गर्छ । जसले रगतको प्रवाहमा समस्या ल्याउँछ ।
यसैगरी चुरोटको यो रसायनले हामीलाई आवश्यक राम्रो कोलेस्टेरोल बिगारेर नराम्रोमा परिवर्तन गर्छ । यसैगरी मुटुका रक्तनलीको भित्तामा हुने तत्वलाई पगालेर बगाउन पनि यसले सघाउँछ । त्यसपछि नयाँ तह बन्छ, जसले रक्त प्रवाहलाई छेक्दै जान्छ त्यसपछि हर्टअट्याक हुन्छ ।
अध्ययन अनुसार ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका लागि हर्टअट्याक हुने पहिलो कारण चुरोटको सेवन हो । त्यसपछि कोलेस्टेरोल हो । त्यसपछि मात्रै हर्टअट्याक हुने जेनटिक कारण हुन्छन् । जसले चुरोट खाइरहेको छ, प्रत्येक चुरोटसँगै आर्टरीमा खराब तत्व जम्ने क्रम बढिरहेको हुन्छ ।
सबभन्दा डर लाग्दो कुरा के हो भने चुरोटका कारण हुने हर्टअट्याक ५० प्रतिशत भन्दा कम ब्लकेजमै हुन्छ । अन्य कारणले हर्ट अट्याक हुन ८० देखि ९० प्रतिशत मुटुकोे रक्तनलीमा ब्लक हुनुपर्छ । त्यसैले चुरोट सेवन मुटुका लागि असाध्यै जोखिमयुक्त छ ।
त्यसैले हरेकलाई भन्ने गरेको छु, चुरोट खाने बेला आफ्नो घर परिवार याद गर्नुहोस् । जब चुरोटका कारण तपाईं हस्पिटल पुग्नुहुन्छ । तपाईंको परिवारको हालत के होला ? तपाईं आफ्नो ज्यान त यसैपनि जोखिममा छ ।
नेपाल आइडल सिजन-२ का बिजेता रबि ओडलाई पन्चेबाजा सहित भब्य स्वागत, नगर परिक्रमा गर्दा दर्शकको ओइरो लाग्यो – भिडियो हेर्नुहोस